आजबाट कोरोना भाइसरविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा दिन सुरु, कसले लगाउन पाउँछन् ? — onlinedabali.com
आजबाट कोरोना भाइसरविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा दिन सुरु, कसले लगाउन पाउँछन् ?
काठमाडौं । सरकारले आजबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको अतिरिक्त मात्रा लगाउन सुरु गर्ने जनाएको छ । रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका व्यक्तिलाई आजदेखि खोपको अतिरिक्त मात्रा दिने लागिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको तीन महिना पूरा भएका व्यक्तिहरूलाई थप एक मात्रा खोप दिन लागेको हो । अतिरित्त मात्रा खोप मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, सक्रिय क्यान्सर पीडित, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी भएका बिरामी र उपचारका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधिहरू प्रयोग गरिरहेका बिरामीले पाउने छन् ।